သရုပ်ဆောင်ယွန်းဝတီလွင်မိုးနှင့် မောင်ထက်ဦးလှိုင်တို့ မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့် ညစာစာ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၄- ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီလွင်မိုးနှင့် ဒေါ်မေသူတို့၏သမီးကြီးဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ယွန်းဝတီ လွင်မိုးနှင့် ဦးမောင်မောင်ညွန့်နှင့် ဒေါ်တင် နွယ်အေးတို့၏သားဖြစ်သူ မောင်ထက်ဦး လှိုင်တို့၏ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့် ညစာစားပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် ရန်ကုန် မြို့ရှိ Melia ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သရုပ်ဆောင် ယွန်းဝတီလွင်မိုးသည် အနုပညာအလုပ်များကို ငယ်ရွယ်စဉ်အရွယ် မှစတင်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Melia ဟိုတယ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ကပြုလုပ်သည့် အဆိုပါ မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါ်မိုးမိုးအေး၊ ဦးရှုမောင် (ယခင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်နီလာရှိန်၊ ဒေါက်တာဦးကိုင် ခန်မုံနှင့် ဇနီး ဒေါက်တာသဇင်ဟန်တို့ရှေ့ မှောက်တွင် သရုပ်ဆောင် ယွန်းဝတီလွင်မိုး နှင့် မောင်ထက်ဦးလှိုင်တို့က လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ အောင် လွင်က ဆုံးမသြဝါဒစကား ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
သရုပ်ဆောင်လွင်မိုး၏ သမီးကြီးဖြစ် သူ သရုပ်ဆောင်ယွန်းဝတီလွင်မိုး၏ မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို အနုပညာအသိုင်း အဝိုင်းမှ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီအောင် လွင်၊ အကယ်ဒမီရဲအောင်၊ ငှက်ပျောကြော်၊ အရိုင်း အစရှိသည့် အနုပညာရှင်များ တက် ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''မြန်မာဇာတ်ကားတိုင်း ပေါကားတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး'' ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
မန္တလေးမြို့ရှိ အရောင်းဆိုင်များတွင် တစ်ခါသုံး ဖော့ဘူးများ အသုံးပြုမှုကို တားမြစ် ပိတ်ပင်သွ
ရန်ကုန်တိုင်း လေးမြို့နယ် လမ်းဘေးဝဲယာရှိ ကျူးကျော်ဆိုင်များကို စတင်ရှင်းလင်း ကျန်မြို့နယ?
စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီးမေတ္တာကန် အပျက်အစီးများလာ၍ အကြီးစားပြုပြင်